मत परिणाम आउने क्रम जारी | We Nepali
वीनेपाली | २०७४ जेठ २ गते १७:१७
काठमाडौँ, २ जेठ । विभिन्न जिल्लाबाट स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनको मतगणना र मत परिणाम आउने क्रम जारी छ ।
आज राति ९ बजेसम्म प्राप्त मत गणनाको परिणाम यस प्रकार छ ।
१. नेपाली काँग्रेस ः प्रमुख÷अध्यक्ष–आठ, उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष – सात
२. नेकपा (एमाले) ः प्रमुख÷अध्यक्ष–१०, उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष – ११
३. नेकपा (माओवादी केन्द्र) ः प्रमुख÷अध्यक्ष–सात, उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष– तीन
४. राप्रपा ः उपप्रमुख – एक
५. स्वतन्त्र ः प्रमुख – एक, उपप्रमुख – एक
फलेवास (पर्वत) २ जेठ । पर्वतको महाशिला गाउँपालिकामा एमालेका राजु पौडेल अध्यक्ष र हीरादेवी थापा उपाध्यक्षमा विजयी भएका छन् ।
महाशिला गाउँपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित एउटाबाहेक सबै वडामा नेकपा(एमाले) विजयी भएको हो ।
अध्यक्षमा विजयी भएका पौडेलले दुई हजार ४५३ मत प्राप्त गरेका छन् भने उनका निकटम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसका उज्ज्वल गुरुङले दुई हजार १० मत पाएका छन् ।
यसैगरी उपाध्यक्ष पदमा विजयी हीरादेवी थापाले दुई हजार ४८३ मत पाएकी छन् भने निकटतम प्रतिद्वन्दी काँग्रेसकी सिर्जना मल्ल ठकुरीको एक हजार ९५१ मत छ ।
त्यस्तै वडा नं १, ३, ४, ५ र ६ मा समेत एमालेको प्यानल नै जितेको छ । वडा नं २ मा भने काँग्रेसले जितेको छ । वडा नं १ मा ईश्वरी भुसाल, २ मा ताराबहादुर राना, ३ मा रोशन गुरुङ, ४ मा पुरनबहादुर मल्ल, ५ मा जीवन उचैं ठकुरी र ६ मा रामबहादुर सुनार विजयी भएका छन् ।
गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकामा काँग्रेस विजयी
गोरखा, २ जेठ । उत्तरी गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकामा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार धनबहादुर गुरुङ विजयी हुनुभएको छ । निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा माओवादी केन्द्रका लाक्पा डुण्डुप लामालाई हराउँदै गुरुङ गाउँपालिका प्रमुखमा विजयी हुनुभएको हो ।
गुरुङले एक हजार २५३ मत ल्याउनुभएको हो भने लामाले एक हजार १८५ मत ल्याउनुभएको निर्वाचन अधिकृत हरिहर दाहालले जानकारी दिनुभयो । उपप्रमुखमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी कुमारी गुरुङ विजयी हुनुभएको छ । गुरुङले एक हजार २८५ मत ल्याउनुभयो भने प्रतिद्वन्द्वी छेवाङ लामाले ९८८ मत ल्याउनुभएको हो ।
चुमनुब्री गाउँपालिकाको सामागाउँ, ल्हो, बिही, छेकम्पार वडा काँग्रेसले जितेको छ । यस्तै प्रोक, चुम्चेत र सिर्दिवास वडा नेकपा माओवादी केन्द्रले जितेको छ । कुल मतदाता तीन हजार ८६९ रहेको चुमनुब्रीमा दुई हजार ९०० मत खसेको थियो ।
गोरखामा काँग्रेस अगाडि
दुई नगरपालिका र नौवटा गाउँपालिका रहेको गोरखाको स्थानीय तहमा मतगणना तीव्ररुपमा भइरहेको छ । आज साँझसम्म नेपाली काँग्रेसले एक गाउँपालिकासहित १७ वडामा जित हासिल गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले ९ वडा, एमालेले ६ र नयाँ शक्तिले २ वडामा विजय हासिल गरेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।
नुवाकोटमा २५ वडाको नतिजा सार्वजनिक
नुवाकोट, २ जेठ । जारी रहेको स्थानीयतहको निर्वाचनको मतगणनामा नुवाकोटमा २५ वडाको परिणाम सार्वजनिक भएको छ । नुवाकोटमा कायम रहेका ८८ वडामध्ये २५ वडामा नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । अन्तिम नतिजाअनुसार नेपाली काँग्रेस १३ वडा, नेकपा (एमाले)ले सात वडा र नेकपा माओवादी केन्द्र पाँच वडामा विजयी भएको छ ।
नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट वडाध्यक्षमा विदुर नगरपालिका–२ मा वीरेन्द्रकुमार शाही, ३ मा बद्रीप्रसाद रिमाल, तार्केश्वर–६ मा ज्ञानेन्द्र तामाङ, शिवपुरी–१ मा महेन्द्रराज खत्री, शिवपुरी–२ मा इन्द्रबहादुर गुरुङ, तादी–१ बाट नकुर दोङ तामाङ, दुप्चेश्वरी–१ मा सुनबहादुर तामाङ, किस्पाङ–२ मा देवनाथ भट्ट, मेघाङ–२ मा रुपबहादुर श्रेष्ठ र दुप्चेश्वर गाँउपालिका–३ मा धुव्रकुमार केसीको प्यानल नै विजयी भएको छ ।
यस्तै, शिवपुरी गाँउपालिका–३ मा रामहरि थापाको प्यानल नै विजयी भएको छ । शिवपुरी–४ सिक्रेमा वडाध्यक्षमा झमक गुरुङसहित काँग्रेसबाट तीन सदस्य विजयी भएका छन् ।
यस्तै, नेकपा (एमाले) का तर्फबाट उम्मेदवार रहेका मेघाङ–१ मा दलसिंह तामाङ, बेलकोटगढी नगरपालिका–१ मा सुब्बा तामाङ, बेलकोटगढी–२ मा रमेशकुमार न्यौपाने, विदुर नगरपालिका–१ मा लेनिन रञ्जित, ककनी गाँउपालिका–१ मा चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, तार्केश्वर–५ मा चुडामणिप्रसाद गजुरेल र किस्पाङ गाँउपालिका–४ मा एकराज घले विजयी हुनुभएको छ । यस्तै, लिखु गाँउपालिका–२ मा भीमबहादुर घलेको प्यानल नै विजयी भएका छन् ।
यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फमा किस्पाङ–१ मा आइतबहादुर घले, तादी–२ मा बच्चुराम तामाङ, सूर्यगढी–१ मा इमानसिंह तामाङ, पञ्चकन्या–१ मा मणिनाथ लामिछाने र दुप्चेश्वर–२ मा दावा तामाङ विजयी हुनुभएको छ । नुवाकोटमा १२ स्थानीतयहमा ८८ वटा वडा छन् ।
यसअघि भएको वडा नं १ र २ को मतगणनामा पनि यही प्यानलका अध्यक्षले जित हात पारेका थिए । काँग्रेसको बलियो मत रहेको भनिएका वडामै काँग्रेस पछि परेको छ । जितसँगै अहिले सदरमुकाम बागलुङबजारमा विजयी दलका कार्यकर्ताले ¥याली निकालेका छन् । अहिले वडा नं ४ को मतगणना चलिरहेको छ ।
ललितपुर, २ जेठ । ललितपुरको महाकाल गाउँपालिकामा नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार विजयी भएका छन् । सो पार्टीका रामचन्द्र दाहालले दुई हजार ८० मत ल्याएर गाउँपालिकाको प्रमुखमा विजयी हुनुभएको हो । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसका भीमसेन घिमिरेले एक हजार ७२२ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो ।
यस्तै उपप्रमुखमा एमालेका कमला तामाङले दुई हजार २६३ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी काँग्रेसका सुशीला अधिकारीले एक हजार ३९९ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो ।
धौलागिरी–३ मा एमाले विजयी
बाबियाचौर (म्याग्दी), २ जेठ । म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–३ मुनाको वडाध्यक्षमा नेकपा एमालेका पुर्म पुन ४३३ मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुनुभएको छ ।
पुनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली काँग्रेसका देवेन्द्र रोकाले ४१६ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । महिला सदस्यमा नेपाली काँग्रेसकी रामदेवी पुन ४६४ मत र दलित महिला सदस्यमा काँग्रेसकी चुनदेवी रसाइली ४५९ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।
खुल्ला वडा सदस्यमा एमालेका खबहादुर बुढा ४७६ मत र देउदत्त मल्ल ४७४ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ । एक हजार ५९७ मतदाता रहेको मुनामा एक हजार ६१ मत खसेको थियो । धौलागिरि–४ मुदीको पनि मतगणना सुरु भएको छ ।
अन्नपूर्ण–५ मा काँग्रेस विजयी
यसैगरी म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ शिखको वडाध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसका दिनेशकुमार पुनले ५७६ मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुनुभएको छ । मगरका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका भीमबहादुर पुन मगरले ४६४ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो ।
सदस्यहरुमा सबै काँग्रेसका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । महिला सदस्यमा बिर्जु रन्तिजा ६२७, दलित महिला सदस्यमा रामसुवा नेपाली ६३४, खुल्ला सदस्यमा राजेश तिलिजा पुन ६३२ र धनबहादुर पाइजा ६४५ मत ल्याई निर्वाचित हुनुभएको छ । एक हजार ९४७ जना मतदाता रहेको शिखमा एक हजार २०८ मत खसेको थियो ।
बेनी नगरपालिकाको १, २ र ३ वडाको मतगणना गर्दा प्रमुखमा एमालेका प्रमोद श्रेष्ठको एक हजार ९२६ र नेपाली काँग्रेसका हरिकुमार श्रेष्ठले एक हजार ७२६ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । उपप्रमुखमा राप्रपाकी सञ्जु बरुवालले एक ५४६ र माओवादी केन्द्रकी ज्योति लामिछाने पौडेलले एक हजार १०८ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
ढोरचौर गाउँपालिका–१ मा माओवादी केन्द्रका रामबहादुर बस्नेत विजयी हुनुभएको छ । वडा नं २ मा माओवादी केन्द्रकै रुद्रबहादुर बुढाथोकी विजयी हुनुभएको छ । यस्तै वडा नं ३ मा नेकपा एमालेका शालिकराम बुढाथोकी र वडा नं ५ मा नन्दलाल बोहरा विजयी हुनुभएको छ । वडा नं ४ मा भने नेपाली काँग्रेसका दिनेश विएम र नेकपा एमालेका देवेन्द्र रोकाले बराबरी मत प्राप्त गरेपछि गोलाप्रथामार्फत काँग्रेसका दिनेश विएम विजयी हुनुभएको छ ।
कुमाख मालिका गाउँपालिकामा स्थगित भएको मतदान सम्पन्न भएको छ । कुमाख गाउँपालिका–७ मा नेपाली काँग्रेसका वडा सदस्य उम्मेदवार दलबहादुर राणाको घरको छतबाट खसेर मृत्यु भएपछि स्थगित भएको निर्वाचन आज सम्पन्न गरिएको हो । अहिले मतपेटिका केन्द्रमा ल्याउने तयारी भएको र आजै बेलुकादेखि मत गणना गरिने बताइएको छ ।
सिन्धुली, २ जेठ । सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिकामा नेकपा (माओवादी केन्द्र)को प्यानल नै विजयी भएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार पानिराज बम्जन चार हजार ७४१ मत प्राप्त गर्दै विजयी हुनुभएको छ । माओवादी केन्द्रकै उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार सङ्गीता माझीले चार हजार ५२५ मत प्राप्त गर्दै विजयी हुनु भएको छ ।
यस्तै नेपाली काँग्रेसका गाउँपालिका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार नवराज श्रेष्ठ आकासले एक हजार ७४५, उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार विमला माझी एक हजार ८९२ र नेकपा एमाले र नयाँ शक्तिको संयुक्त प्यानलका नयाँशक्तिका एक बहादुर रानाले एक हजार ८६६ र नेकपा (एमाले)की उपाध्यक्ष शर्मिला माझीले एक हजार ९७७ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
नेपाली काँग्रेसले सिन्धुलीको गोजन्जोर गाउँपालिका–२ मा दौलत कार्की ४७७, ५ मा वुद्धिबहादुर पाल्पाली खड्का ५३०, वडा नं ३ मा पुष्कर बरालले ४४२, फिकल गाउँपालिका–१ मा चेतबहादुर विश्वकर्मा ६००, कमलामाई नगरपालिका–१ मा महेश खतिवडा ९१५, दुधौली नगरपालिका–१ मा गोविन्द पहाडी ९५० र तीनपाटन गाउँपालिका–३ मा लालबहादुर स्याङ्तान ३९५ मत प्राप्त गर्दै निर्वाचित भएका छन् ।
यस्तै नेकपा (एमाले)ले तीनपाटन गाउँपालिका–१ मा गोविन्द राउत ७६६, २ मा हेमबहादुर श्रेष्ठ ५१९, गोलन्जोर गाउँपालिका–४ मा वेगबहादुर मगर ६७६, फिकल गाउँपालिका–२ मा शंकरबहादुर भण्डारी ६७३, ३ मा टेकबहादुर रजनमगर ५७६, दुधौली नगरपालिका–३ मा साने धामी ६५०, सुनकोसी गाउँपालिका–३ मा भोजकुमार सिञ्जाली ३२७ र कमलामाई नगरपालिका–३ मा खड्गप्रसाद चौलागाई ३९१ मत प्राप्त गर्दै निर्वाचित हुनुभएको छ ।
यस्तै मरिण गाउँपालिका–१ मा हिराबहादुर गुर्मछान ६१६, वडा नं २ मा चन्द्रनाथ गौतम ६६७, वडा नं ३ मा विमर्श मोक्तान ६९३, वडा नं ४ मा धनबहादुर स्याङ्तान ८७८, वडा नं ५ मा प्रचार सिं बम्जन ४३१, वडा नं ६ मा कुरसाङ लामा ६२२ र वडा नं ७ मा राजन थापाले ७०५ मत प्राप्त गर्दै विजयी हुनुभएको छ । यस्तै माओवादी केन्द्रका गोलन्जोर गाउँपालिका–१ मा मीनबहादुर सुनुवार ५२८, हरिहरपुरगढी गाउँपालिका–१ मा कार्साङ घलान ६७६ र चन्द्रबहादुर राई ४२९ मत प्राप्त गर्दै विजयी हुनुभएको छ ।
दोलखामा माओवादीको ८ वडा अध्यक्ष, काँग्रेस ४, एमाले ६ विजयी
चरिकोट, २ जेठ । स्थानीय तहको निर्वाचनको पछिल्लो परिणामअनुसार दोलखा जिल्लाको विभिन्न स्थानबाट मत परिणाम प्राप्त हुने क्रम जारी छ ।
त्यसैगरी जिरी नगरपालिका–२ को वडाध्यक्षमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट ङिमापाल्दे शेर्पा, खुला सदस्यमा आङङिमा शेर्पा र पूर्णबहादुर खत्री, महिला सदस्यमा शान्ति कार्की र दलित महिला सदस्यमा निर्मला विक विजयी भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय दोलखाले जनाएको छ । जिरी नगरपालिका–३ मा एमालेको प्यानल नै विजयी भएका छन् जसमा अध्यक्षमा नुर्वु शेर्पा, सदस्यमा मिङमर शेर्पा, युवराज बस्नेत, महिलामा मञ्जु कार्की खड्का र दलित महिला सदस्यमा किष्णमाया दमिनी विजयी भएका छन् ।
त्यसैगरी जिरी नगरपालिकाको प्रमुखमा एमालेका तर्फबाट टङ्क जिरेल अग्रस्थानमा रहेका बुझिएको छ । त्यसैगरी वैत्यश्वर गाउँपालिकाको अध्यक्षमा काँग्रेसका छवि लामा अग्रस्थान हुनुहुन्छ भने तामाकोसी गाउँपालिकाको अध्यक्ष नेपाली काँग्रेसका भवेन्द्र कार्की अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ । त्यसैगरी सैलुङ गाउँपालिकाको मतगणना आज बिहान ८ बजेबाट सुरु गरिए पनि कुनै पनि परिणाम सार्वजनिक गरिएको छैन । कालिञ्चोक गाउँपालिकामा संयुक्त प्यानलले अग्रता लिएको जानकारी प्राप्त भएको छ भने विगु गाउँपालिकामा पनि मतगणना जारी रहेको बताइएको छ ।